သွေးတိုးတာက အမြဲတမ်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေတာ ဟုတ်ရဲ့လား - Hello Sayarwon
ခေါင်းတွေမူးနေပြီ။သွေးများတိုးနေလားမသိဘူး။ အငန်လျှော့စားတယ်၊သွေးတိုးမှာစိုးလို့လေဆိုတာကတော်တော်များများကြားရလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနော်။ အရင်ကဒီအသံကို ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေဆီက ကြားရတာများပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့၂၀ကျော် ၃၀လောက်အသက်အရွယ်မှာတင်ကြားလာရပါပြီ။နောက်ပြီး သိထားတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။သွေးတိုးကနောက်ဆက်တွဲရောဂါတော်တော်များများကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အရင်ကပြောခဲ့တာတွေနဲ့မတူဘဲသွေးတိုးအကြောင်းကို ရှုထောင့်လေးပြောင်းပြီးပြောကြည့်ရအောင်လား Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ……….
သွေးတိုးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနြာဖစ်နိုင်ပါတယ်။သွေးတိုးရောဂါရှိနေပြီဆိုရင် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ လေဖြတ်တာ၊ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ အခြားသောရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သွေးမတိုးအောင်ထိန်းရမယ်သွေးတိုးရောဂါစဝင်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။တောက်လျောက်လက်ခံလာခဲ့တဲ့ အယူအဆပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ လက်ခံရင်းစွဲအယူအဆနဲ့ နည်းနည်းကွဲလွဲတဲ့ အယူအဆအကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင်လား Helloဆရာဝန်ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ…..
သွေးတိုးရှိတာက တစ်ခါတလေမှာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဒိုင်းတစ်ခုရထားသလိုပါနော်
ဒီပြောကြားချက်ကို ခိုင်မာစေဖို့ အမေရိကန်ရဲ့ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၇၅ သန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရောဂါရှိသူတွေကို အုပ်စုခွဲလေ့လာခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုနေထိုင်စားသောက်ပုံချင်းမတူအောင် ပြင်ဆင်ပေးပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက ပုံမှန် လူနာတွေကိုသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပေးတာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေ့လာမှုအတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရျောက်သူတွေကသွေးတိုးရောဂါခံစားနေရသူတွေမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်နိုင်ခြေက အခြားသူတွေထက်ပိုများနေလားဆိုတာကိုပါလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှု အရသိရတာကသွေးတိုးရောဂါခံစားနေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ အခြားသောနောက်ဆက်တွဲရောဂါခံစားရနိုင်ခြေနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုပါ။ ဒီအကျိုးရလဒ်ကို သိသသာသာတွေ့ရှိရနိုင်တာက အသက် ၈၀ အထက် ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေမှာပါနော်။
သုတေသီတွေကလေ့လာမှုမျာပါဝင်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး ၂ နှစ်ကြာတိုင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၆ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးတဲေ့နာက်မှာတော့ ထပ်မံရှာဖွေလိုက်တဲ့ အချက်တစ်ခုကသွေးတိုးရောဂါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိသက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်တော့ အမျိုးသားလား အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အချက်ရယ်၊ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံရယ်၊ ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) တို့ကိုပါလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သောက်သုံးနေရတဲ့ သွေးကျဆေးကအစပေါ့။ ဒီနေရာမှာတွေ့ရှိလိုက်ရတာကနေ့ခင်းတစ်ရေးတမောအိပ်စက်တာကသွေးတိုးကျစေနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။လေ့လာမှုရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့-
“သွေးပေါင်ချိန် အပေါ်သွေး ၁၄၀ mmHg နဲ့ အောက်သွေး ၉၀ mmHg ထက်နည်းနေတဲ့ အသက် ၈၀ အရွယ်ဖိုးဖိုးဖွားဖွာတွေမှာ ဒီသွေးပေါင်ချိန်ပမာဏထက်ပိုများနေတဲ့ (သွေးတိုးတတ်တဲ့) ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေထက်သေဆုံးနိုင်ခြေက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုများနေတယ်၊ လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ “
ဒီလိုဆိုလို့ သွေးတိုးနေတာမှ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ်လို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ တကယ်တော့ ဘာရောဂါမှမရှိတာကအကောင်းဆုံးပါ။ရောဂါရှိသူတွေက ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်မှုကို အမြဲမပြတ်ခံနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဝင်မလာအောင် ဂရုစိုက်မိနေတဲ့သဘောပါ။ ဒီတော့သွေးတိုးတာရော၊သွေးတိုးနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကိုပါ ခပ်ကင်းကင်းနေနိုင်အောင် လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုလေးတွေလုပ်လို့နေ့ရက်တိုင်းကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းလိုက်ပါနော် Helloဆရာဝန်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ……………………
Is high blood pressure always bad?https://www.medicalnewstoday.com/articles/324697.php Accessed Date 22 March 2019
Is High Blood Pressure Always Bad? Why Doctors Take Hypertension So Seriouslyhttps://www.cheatsheet.com/health-fitness/is-high-blood-pressure-always-bad-why-doctors-take-hypertension-so-seriously.html/ Accessed Date 22 March 2019